Fialam-boly amin'ny daty voalohandohany - mila mila manadio aho?
Matetika, ireo vehivavy voan'ny faditra kely aloha, dia mangataka amin'ny dokotera hoe ilaina ve ny fanadiovana. Andeha isika hiezaka hamaly io fanontaniana io ary hilaza amin'ny antsipiriany izay tranga izay aorian'ny fanalàn-jaza an-tsokosoko .
Inona no atao hoe "fanadiovana" aorian'ny fiterahana?
Amin'ny fampiasana ara-pahasalamana, io fomba fitsaboana io dia antsoina hoe fanosihosena, na curettage. Izany dia midika ho fanesorana tanteraka ny sisa tavela amin'ny vatan'ny embryon na ny atody fetal, raha toa ilay fikarakarana fifindrana tao anatin'ny fotoana fohy, herinandro 5-8.
Mila madio ve aho aorian'ny famoizana aina ary manao izany hatrany?
Taorian 'ny fanalan-jaza an-tsokosoko no hita, araka ny asehon'ny tsiranoka ny tranon-jaza sy ny fisehoan-dra, ny dokotera dia mandinika ilay vehivavy eo amin'ny seza.
Mba handinihana ny tranon-jaza, ny ultrasound ihany koa dia tanterahana. Ny angon-drakitra azo alaina ary manampy amin'ny famaritana raha ilaina ny fikarakarana mandritra ny fiterahana, izay nitranga tany am-piandohan'ny bevohoka.
Raha mba miteny, miankina amin'ny antontanisa statistika, dia eo amin'ny 10% amin'ny tranga no ilaina io fomba fanao io aorian'ny fanalàn-jaza an-tsokosoko mandritra ny fotoana fohy. Na izany aza, dia ilaina ny manamarika fa matetika ny fikolokoloana dia atao miaraka amin'ny tanjona ara-pitenenana, noho ny tsy fahafahana manao fitiliana ultrasound na amin'ny tsy fisian'ny fotoana ho azy (ohatra amin'ny ra miteraka, ohatra).
Any amin'ny firenena eoropeanina, ny fampihetsiketsehana dia tsy atao afa-tsy amin'ny tranga misy ny soritr'aretin'ny valanaretina uterine, ary koa raha ny vanim-potoan'ny fitondrana vohoka izay efa nitranga dia mihoatra ny 10 herinandro ary avy eo dia misy ra mandriaka. Ity tolotra ity dia nomena ny faniriana vaksiny, izay tsy dia mampalahelo loatra ho an'ny vatana.
Afaka ny ho madio ve ny fiterahana?
Ity fanontaniana ity dia mahaliana ny vehivavy maro manakaiky aorian'ny fiterahana.
Na inona na inona vanim-potoana nahitana ny fanalàn-jaza dia ilaina ny fanadihadiana amin'ny fandinihina ny lavaka fananganana tranonjaza mba handraisana fanapahan-kevitra momba ny fandrindrana.
Raha misy ny fandavana tanteraka ny embryon na ny atody foetal, - tsy vita ny fanadiovana.
Raha toa ka tsy hita ny fandehan-javatra hita maso, dia mety hanapa-kevitra ny hitandrina ny vehivavy mandritra ny 2-3 herinandro ny fitsaboana ara-pitsaboana. Aorian'io fotoana io, ny fanadihadiana faharoa dia natao amin'ny fampiasana ny fitaovana ultrasound. Alohan'ny hanatanterahana izany fomba izany, ny vehivavy dia asiana fanafody manohitra ny fiarovan-tena, izay manampy amin'ny fisorohana ny fahasarotana sy ny fampiroboroboana ny aretina raha toa ka mbola mitoetra ao amin'ny tranonjaza ny ampahany kely amin'ny vatan'ny embryon. Raha ny marina dia indraindray izy ireo dia kely loatra ka tsy azo atao ny manaisotra azy ireo amin'ny alalan'ny fitaovana manokana.
Ankoatra izany, ny andraikitra manan-danja iray amin'ny famaritana raha ny fanadiovana aorian'ny fivalozana dia atao amin'ny famaritana ny haavon'ny hCG, izay tanterahina foana amin'ny fanalan-jaza an-tsokosoko. Ity fandinihana ity no ahafahana mamaritra raha mbola mitoetra ao amin'ny tonon-taonany ny embryon, izay matetika miteraka fihenan'ny hCG. Raha mitombo ny fifantohan'io hormonina ao amin'ny ra io, dia tendrena ny fanaraha-maso ny valanaretin'ny uterine.
Araka izany, azo lazaina fa ny azo atao raha tsy afaka manadio aorian'ny fiterahana amin'ny fahazazana izy na tsy vitany ny fanapahan-kevitr'ireo mpitsabo noho ny fandinihan-draharahan'ny vehivavy sy ny angona azo avy amin'ny ultrasound. Tsy maintsy lazaina ihany koa fa matetika ny fampilazana no atao ela kokoa noho ny fanalan-jaza an-tsokosoko, raha ny ampahany ao amin'ny foetus dia mijanona ao amin'ny tononkalo uterus, izay tsy voamarik'ireo mpitsabo fotsiny nandritra ny asa fanaovan-javatra.
Azo atao ve ny manapaka volo amin'ny vehivavy bevohoka?
Fiainana ara-pananahana mandritra ny fitondrana vohoka
Vokatry ny fitondrana vohoka
Toe-piainana ambany mandritra ny fitondrana vohoka - 21 herinandro
Fahadiovana mahazatra eo amin'ny vohoka
Ny hematoma ao amin'ny tranonjaza mandritra ny fitondrana vohoka
Fikarakarana sakafo amin'ny endriky ny cheby chic
Fampandrosoana ny vehivavy
Ny tsara tarehy dia manangona sary iray amin'ny ririnina
Arena ho an'ny tolona
Kislovodsk - toetoetran'ny mpizahatany
Ny karazan-bozaka "Mashenka"
Sandals amin'ny kiraro 2017 - modely maoderina, modely sy modely
Sary hosodoko amin'ny fitaratra misy fitaratra
Fashionable Bootlion 2015
Rahoviana no afaka miteraka aorian'ny sezareana aho?
Ahoana no hanatsarana ny metabolisma ao amin'ny vatana?
Broccoli ao amin'ny multifariate